Talata manaraka ny Epifania – Trinitera Malagasy
Talata manaraka ny Epifania
1 Joany 4, 7-10 /
Md Marka 6, 34-44
Tia antsika Andriamanitra ka naniraka ny zanany ho sorom-panavotana ho antsika. Izy no tia antsika mialoha mba hahafahantsika mitia toy ny nitiavany antsika. Ny Zanany no Mpisolovava, παράκλητος (parakletos) izany hoe ilay olona tsongoin’olom-bolo, henoin-teny ary miantoka fa tsy hoheloina isika noho izy.
Ao amin’ny toko faha-6 amin’ny Evanjeliny dia naniraka ny apostoly hitory fibebahana i Jesoa. Henontsika tamin’ny Evanjely omaly (Mt 4) fa nanasitra ny rofy rehetra izy mpampianatra. Eto dia lazain’i Marka fa ny Apostoly koa nanosotra menaka ny marary dia nanasitrana ny maro tamin’izy ireny. Dia avy eo mitantara ny momba an’i Joany Batista novonoina, mampahatsiaro izay te ho mpianatra fa tsy azo hihodivirana ny fanenjehana, izay mety hihafara hatramin’ny fanapahan-doha aza.
Dia mitohy ny fitantarana ny fiainan’ireo Apostoly: miverina eo amin’i Jesoa mba hitantara aminy izay rehetra natao sy nampianarina. Izany no atao hoe mivavaka, miala sasatra miaraka amin’Izy Mpampianatra. Saingy ny fahitana ny vahoaka be (eto no manomboka ny Evanjely anio) dia nampangoraka azy (σπλαγχνίζομαι splanknizomai), nampangotika ny ati-tsinainy, satria “mamindrafo sy marina ary mihantra (רָחַם= raham-rahamim) ny Andriamanitsika (Salamo 116,5) ka nahatonga azy hampianatra zavatra maro azy ireo, na dia hiala sasatra aza no anton-diha. Saingy nony hariva teo am-pamahanana ny Tenin’ny Fianana ireto vahoaka, dia mitebiteby ny mpianatra, miahy ny sakafon’ny vatana.
Tsara fo sy miantra Andriamanitra (Eksaody 34,6). Tsy vitan’ny hoe mamindra fo izy (רַחוּם raHùm) fa tsy afaka ny ho faly raha tsy mahita ny zanany miadana sy finaritra (חַנּוּן Hannùn). Ho an’ny mpianatra anefa, mora ny fanafodiny: ravao ny vahoaka hiahy ny tenany, hizaha sakafo hohaniny. Indraindray koa noho ny tahotra sy ny mety tsy fahaizana dia aleo miala andraikitra, saingy mazava azava anefa ny baiko omen’i Jesoa ny Mpianany: “Omenareo hanina izy ireo”.
Angatahin’i Jesoa amintsika ny mofo ananantsika mba hahafahana mifampizara. λέγει αὐτοῖς (legei autois), “verbe au présent” no itenenan’i Marka azy, mba hahatsapantsika fa amin’ny fotoana rehetra no hitenenan’i Jesoa. Mangataka amintsika tsirairay izy mba hanome izay eo am-pelatanana mba hifampizarana. Mahagaga ihany manko fa mamokatra avo roa heny amin’izay mety ho lanin’ny mponina rehetra ny tany, saingy indrisy fa misy ny maty noana, satria misy ny mitazona ho azy ny anjaran’ny sasany: izay azoko, tazoniko ho ahy, ny an’ny hafa hifampizarana. Izay mitazona ny zavatra tsy ilainy, hoy Md Jean Chrysostome dia mpangalatra ny anjaran’ny mahantra.
Ireo apostoly ireo tsy nanana afa-tsy ny fahalalana ny boky dimin’i Moizy ary ny lalàna sy ny mpaminany, saingy ny tso-drano avy amin’ny Mpampianatra no nahazoan’ny vahoaka Apostoly roa ambin’ny folo, vatofototra iorenan’ny Fiangonana, entin’i Jesoa mamahana ny vahoakany. I Herôda any amin’ny lapam-panjakana no miara-misakafo amin’ny tandapany, izay mpianatr’i Jesoa, any an’efitra no antsoiny hamahana ny vahoakany, hamaly ny fanontanian’ny Salamo hoe : “hahavokatra latabatra any an’efitra va Andriamanitra” (Sal 78, 19). Ny fanekena ny tenin’Izy Tompo no hahafahana mampitsiry ahi-maitso any an’efitra (izaia 35, 1), satria ny vahoaka noana dia tarihin’ny Mpiandry azy, toy ny ondry, eny amin’ny ahi-maitso (sal 22). Any amin’ny toko faha-valo moa i Md Marka mbola miverina amin’ny mofo fiton’ny Diakra, mofo fiton’ny fanompoana zary fanomezana fiton’ny Fanahy, manamasina ny Fiangonana.
Nangonina ny sombiny sisa tsy lany, roa ambin’ny folo sobika, hilazana fa avy amin’ny alalan’ny Apostoly dia manohy mamahana ny vahoakany Andriamanitra. Fitiavana izy. Tsy nampitombo ny mofo i Jesoa fa nitso-drano azy, mampianatra antsika hahatsiaro fa fanomezana avy amin’Andriamanitra ny sakafo (na ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy), ka ny fifampizarana no fitehirizana hahafahana mampitombo azy ka hananana amby ampy hiadanan’ny rehetra.
Ampianarin’i Jesoa izay mandray ny vokatry ny tany (mofo) sy izay mandray ny vokatry ny fisasarana (trondro) mba hahatsiaro ny hiandrandra ny lanitra, hisaotra an’ilay manome ny voa afafy ho an’ny mpamboly sy ny hanina ho an’ny mpiasa rehetra (Izaia 55, 10). Tsy afaka ny hizara izay eo am-pelatanany ho an’ny hafa izay tsy mahatsapa fa fanomezana maimaim-poana avy amin’Andriamanitra izay ananay. I Jesoa dia manome (ἐδίδου, verbe δίδωμι au temps imparfait) ny mofo voatsodrano ho an’ny mpianany, entina hilazany fa tsy mitsahatra ny mizara ny tenany ho Mofon’ny fiainana ho antsika Izy. Ireo dimy arivo, isan’ny mpino nandray ny fampianaran’i Piera sy Joany (Asa 4,4) dia nivelona isan’andro ny Eokaristia izay nankalazainy (Asa 4, 32-35).
Ho haintsika anie ny hizara izay harena sitrak’Andriamanitra omena antsika ary hampifanaraka ny fiainana an-davanandro amin’ny Eokaristia izay ankalazaina.
Alarobia manaraka ny Epifania
Alatsinainy manaraka ny Epifania